Sary vaovao an'ny Huawei P20 no voasivana manambara endrika mahavariana | Androidsis
Sabemos que Huawei dia tsy handefa ny P20 vaovao mandritra ny Mobile World Congress 2018hetsika izay mitranga izao any Barcelona izao, kosa, ny orinasa dia hanolotra ny fitaovany amin'ny hetsika mitokana amin'ny 27 martsa any Paris, France.
Na izany na tsy izany dia tsy mijanona mihitsy ny famoahana ary ny Huawei P20 dia nahita ny hazavana alohan'ny fotoana nanambarany a endrika tsara tarehy miaraka amin'ny rafitra vy sy vatana fitaratra.
Huawei data P20 naseho tao amin'ilay famoahana vaovao
Ny sary tafaporitsaka androany dia manambara fa hanana efijery feno miaraka amin'ny 18: 9 ny fitaovana. Tamin'ny fivoahana teo aloha dia afaka nandinika izany isika ny P20 dia hanana fanapahana mitovy amin'ny iPhone X ao ny tampon'ny efijery, na dia tsy mamela antsika hahita io endri-javatra io aza ity sary ity.
Any aoriana dia misy fakantsary telo sy LED Flash, niova tanteraka ny toerana misy ny lantira raha oharina amin'ireo sary voasivana teo aloha, ankehitriny ny fakan-tsary dia mifanaraka marindrano fa tsy mitsangana.
Ny famaritana izay navoaka ny herinandro teo aloha dia nampiseho a 12 MP + 16 MP + 16 MP fanamboarana miaraka amin'ny fifantohana marani-tsaina sy fisokafan'ny f / 1.8. Eo aloha dia hisy fakan-tsary tokana 8-megapixel miaraka amina f / 2.0.
Na dia tsy misy na inona na inona voamarina dia voalaza fa ny Huawei P20 dia mety ho tonga miaraka a HiSilicon Kirin 970 processeur ary bateria 3,320 mAh.
Ankoatry ny P20, Huawei dia andrasana handefa kinova 'PRO' miaraka amin'ny kinova roa an'ny RAM 6GB misy fitehirizana 128GB ary RAM 8GB miaraka amin'ny fitehirizana 256GB. Herinandro lasa izay dia tafaporitsaka izy ireo mety ho fampiasa amin'ny Huawei P20 Pro apetrany amin'ny a Kirin 970 fikirakirana ary bateria 4,000 mAh.
Ary farany, ny famoahana ny katalaogin'ny magazay an-tserasera dia mampiseho ny Huawei P20 Pro miaraka a vidin'ny 5,899 750 Yuan, eo amin'ny XNUMX euro eo ho eo, noho izany dia afaka manantena isika fa manodidina ny 20 euro ny P600.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Sary vaovao an'ny Huawei P20 no sivana manambara famolavolana mahavariana